Abacre Restaurant Point of Sale (POS) - Features Major
Abacre Point Restaurant ee Sale - Features Major
Abacre Point Restaurant ee Sale waxaa hadda lagu iibiyo ee 75 dal.
User interface waxaa laga heli karaa 11 luqadood: Carabi, Bulgaria, Holland, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Portugal, Russia, Spain iyo Turkiga. Waxaa xitaa macquul ah in ay si fudud u turjumaan software ah afaf kale tarjumaad fudud ee file qoraalka luqadda .
Shaqooyin kala duwan: admin, khasnaji, server, adeegto, iyo hoostees leh mudnaanta kala duwan helaan.
Z-Out Cash khaanadda iyo Z-Out Restaurant Close sheegay.
Alaabta menu farcan ka koobantahay.
Waxaa suurtagal ah in la qeexo qaab dhismeedka network kala duwan, tusaale ahaan, laba kombiyuutarada ee amarada galaya, hal kombiyutar khasnaji iyo hal kombiyutar jikada.
Print Bill (Customization biilka sare, tusaale ahaan, qaybaha show; muujiyaan modifiers free).
Print Notifications in jikada iyo bar.
Wareeji si ay miiska kale.
U qaybi si galeen qeybo ka mid loo siman yahay.
Ka dhig modifiers item (tusaale ahaan, si wanaagsan loo sameeyo, dhif ah, yaanyo, iwm).
Ka dhig si ee tirada chit ama qoraal.
Search for amaro uu macmiilku, adeegto, khasnaji, tirada miiska iwm
Dacwadaha ku saabsan waxyaabaha menu:
Samee qoraal ku saabsan jikada.
In si ay u muujiyaan Dooro wada hadal gade waxyaabaha la doonayo.
Recipe ee jikada iyo bar.
Actions ee Jikada view / Bar:
Samee wax sidii la kariyay.
View item ee la karinayo.
Sales by miiska
Sales by adeegto
Sales by hoostees
Talooyin by server
Inventory Dhinaca by Categories Menu
Macaashka hka by Categories Menu